Ezinye iilekese zaseMorocco kunye needyuli | Ukuhamba kwe-Absolut
Iilekese eziqhelekileyo kunye nee-dessert
Enye yezona zinto zimela eyona nkcubeko yelizwe yi-gastronomy yayo. Lowo uvela eMorocco unobutyebi obuninzi bezithako kunye nezitya ezahlukeneyo ngenxa yobuninzi botshintshiselwano lwenkcubeko ilizwe elinalo nabanye abantu kwimbali yonke njengeeBerbers, iiArabhu okanye inkcubeko yeMeditera.
Ke, ke, sisiporho esisulungekileyo kodwa esilula ngaxeshanye, apho umxube weencasa ezimnandi nezinetyuwa kunye nokusetyenziswa kweziqholo kunye nezinongo.
Kodwa ukuba i-gastronomy yaseMorocco yaziwa ngento ethile, yeyokutya kwayo okumnandi. Ukuba unomdla wokupheka kwaye unezinyo elimnandi, ungaphoswa yile post ilandelayo apho sijonga ezinye zeelekese ezilungileyo eMorocco.
1 Zeziphi izithako ezisetyenzisiweyo kwizonka zaseMorocco?
2 Iilekese ezili-10 eziphezulu zaseMorocco
2.3 Iimpondo zebhokhwe
Zeziphi izithako ezisetyenzisiweyo kwizonka zaseMorocco?
Iilekese zaseMorocco zenziwa ikakhulu ngomgubo, isemolina, amandongomane, ubusi, isinamon kunye neswekile. Umxube wezizithako ubangele iiresiphi ezidumileyo nezandiswe ngokukhawuleza kwihlabathi liphela.
Ngaphakathi kwincwadi eyahlukileyo yeeresiphi kwiilekese zaseMorocco kukho izitya ezininzi kodwa ukuba awukaze uzame ubuchule bazo, awungekhe uziphose ezi zimnandi.
Iilekese ezili-10 eziphezulu zaseMorocco
Enye yeenkcenkcesheli zeenkwenkwezi zokutya okuphakathi kweMpuma Mpuma eye yawela imida. Imvelaphi yayo iseTurkey, kodwa njengoko isanda kwihlabathi liphela, kuye kwavela iintlobo ezahlukeneyo ezibandakanya iintlobo ezahlukeneyo zamandongomane.
Yenziwe ngebhotolo, i-tahini, isinamon powder, iswekile, i-walnuts kunye ne-phyllo dough. Inyathelo lokugqibela emva kokupheka kukuyihlamba ngobusi ukufumana idizethi enencasa enencasa ethandekayo edityaniswe noburhabaxa obufunyenwe kukusetyenziswa kwamandongomane kunye nefry khekhe.
Iresiphi ilula kakhulu kwaye ungayilungiselela ngokulula ekhaya. Ukuyisebenzela, kufuneka inqunywe kwiincinci ezincinci kuba i-dessert ehambelanayo. Nangona ingaveli eMaghreb, yenye yeelekese eziselwe kakhulu eMorocco.
Umfanekiso | I-Wikipedia ngu-Indiana Younes
Enye yeelekese ezidumileyo zaseMorocco, ngakumbi phakathi kwabantwana, yiSeffa. Sisitya esithandekayo elizweni esinotyuwa kunye neswiti. Iqhele ukwenziwa kumsitho wemihla ekhethekileyo, kwiindibano zosapho, xa kuzalwa usana okanye nasemtshatweni.
Ukongeza, kulula kakhulu ukuyilungiselela ke ayifuni ukuchitha ixesha elininzi ekhitshini. Ingatyiwa njengesidlo sakusasa njengoko esi sidlo sinotyebile kwii-carbohydrate ezintsonkothileyo ezivelisa amandla ahlala ixesha elide, anika yonke into oyifunayo ukuze ujongane nosuku olude emsebenzini.
Ukulungiselela uguqulelo olumnandi lweSeffa, yonke into oyifunayo ngumzala omncinci okanye irayisi noodles, ibhotolo, iialmonds ezisikiweyo, iswekile yokubhabha kunye nesinamon. Nangona kunjalo, kukwakho nabo bongeza imihla, i-lemon peel, itshokholethi, iipistachios okanye i-orenji etyibilikayo njengesitya esinokuthi silungiselelwe ukuthanda usapho ngokongeza ezinye izinto.
I-Seffa yenye yeelekese ezisempilweni kakhulu zaseMorocco kuba i-couscous iqulethe isixa esikhulu sefayibha, ilungele ukucoca umzimba. Ukongeza, iiamangile zinenani elikhulu lecalcium. Ngamafutshane, isahlulo seSeffa lukhetho olunconyelweyo lokuhlaziya iibhetri zakho ngendlela esempilweni kwaye emnandi.
Umfanekiso | Kulungile
Enye yeelekese eziqhelekileyo zaseMorocco zii-kabalgazal okanye iimpondo zebhadi, uhlobo lokulahla inkunkuma enevumba elimnandi elizaliswe ziiamangile kunye neziqholo esimilo saso esikhumbuza iimpondo zesisilwanyana kwilizwe lama-Arabhu elinxulunyaniswa nobuhle nobuhle.
Le dessert edumileyo egoso yenye yeelekese zesintu zaseMorocco kwaye zihlala zikhatshwa yiti ngamaxesha athile.
Ukulungiswa kwayo akunzima kakhulu. Amaqanda, umgubo, ibhotolo, isinamon, iswekile, ijusi kunye nexolo leorenji zisetyenziselwa intlama ecekeceke. Kwelinye icala, iiamangile zomhlaba kunye neentyatyambo eziorenji zisetyenziselwa uncamathiselo ngaphakathi kweempondo zebhadi.
Umfanekiso | Ukutya kweMaroquin
Yaziwa ngokuba yi «Moroccan churro», I-sfenj yenye yeelekese eziqhelekileyo eMorocco, onokuzifumana kwizitali zezitrato nakwesiphi na isixeko kweli lizwe.
Ngenxa yobume bayo, iyafana nedonut okanye idonati kwaye inikwa ubusi okanye iswekile eyimpuphu. Abantu baseMorocco bayithatha njengesiphatho, ingakumbi ezinzulwini zobusuku bephelekwa yeti emnandi.
Izithako ezisetyenziselwa ukwenza i-sfenj ligwele, ityuwa, umgubo, iswekile, amanzi afudumeleyo, ioyile kunye neswekile yokufafaza ifafazwa ngaphezulu ukuhombisa.
Esinye sezona zitya zimnandi zeAlahuita cuisine zii briwats, amashwamshwam amancinci amancinci anokuzaliswa ngetasta enetyiwa (ityhuna, inkukhu, imvana ...) kunye neswiti kwaye zihlala zikhonjelwa kwimibhiyozo kunye namaqela.
Kwinguqulelo yayo eswekile, ii-briwats yenye yeelekese zesintu zaseMorocco. Yikhekhe encinci emile kunxantathu kwaye intlama yayo ecekeceke kulula kakhulu ukuyilungisa. Ngokubhekisele ekugcwaliseni, kulungiselelwa ukutyatyamba kwamanzi eorenji, ubusi, isinamoni, iiamangile, ibhotolo kunye nesinamon. Uyolo!
Enye yeelekese ezidumileyo zaseMorocco yi-trid, ekwabizwa ngokuba yi "khekhe lendoda elihlwempuzekileyo." Ihlala ithathwa kwisidlo sakusasa ihamba neglasi yeti okanye ikofu. Ilula kodwa inencindi.
Ngenxa yamandla abo okutya okunesondlo, i-chebakias yenye yeelekese ezithandwa kakhulu eMoroccan ukuzila ukutya eRamadan. Bazithanda kakhulu kangangokuba kuqhelekile ukubafumana nakweyiphi na imakethi okanye ivenkile yepasta kweli lizwe kwaye eyona ndlela yokubonwabela ikofu okanye iti yeminti.
Zenziwe ngentlama yomgubo wengqolowa obunjiweyo ukuba uqhotse kwaye usebenze kwimigca eqengqelweyo. Ukuchukumisa kwasekuqaleni kwe-chebakias kunikwa iziqholo ezisetyenziswa kuyo, njengesafroni, intsingiselo yeentyatyambo eorenji, isinamoni okanye i-anise yomhlaba. Okokugqibela, le dessert yenziwa ngobusi kwaye yagcwala isesame okanye imbewu yesesame. Uyolo kwabo bathanda iidessert ezinevumba elinamandla.
Umfanekiso | Vganish
Le yenye yeelekese ezinganyangekiyo zamnandi kakhulu zaseMorocco. I-Crispy ngaphandle kwaye inamanzi ngaphakathi, le yipheki emnandi eseMbindi Mpuma eyenziwe ngeenwele zengelosi, ibhotolo ecacisiweyo kunye ne-akawi cheese ngaphakathi.
Emva kokupheka, i-kanafeh igalelwe isiraphu enamanzi amnandi kwaye ifafazwe ngama-walnuts atyumkileyo, iiamangile okanye iipistachios. Le dessert inevumba elimnandi yinto yokwenyani kwaye iya kukuhambisa eMiddle East ukusuka kulunya lokuqala. Kuthathwa ngokukodwa ngeeholide zikaRamadan.
Umfanekiso | I-Wikipedia ngu-Mourad Ben Abdallah
Nangona imvelaphi yayo ikhona eAlgeria, i-makrud iye yaba yenye yeelekese ezithandwa kakhulu eMorocco kwaye ixhaphake kakhulu eTetouan nase-Oujda.
Iphawulwa ngokuba nemilo yedayimane kwaye intlama yayo yenziwa nge-semolina yengqolowa, ethosiweyo emva kokugcwaliswa ngemihla, amakhiwane okanye iiamangile. Umphumo wokugqibela unikezelwa ngokuhlamba i-makrud kubusi kunye neentyantyambo zamanzi. Imnandi!
Umfanekiso | ICraftlog
Enye iilekese zaseMorocco ezinikwa zonke iintlobo zamaqela zii-feqqas. Ziqhekeza kwaye zenze ii-cookies ezenziwe ngomgubo, igwele, amaqanda, iiamangile, amanzi a-orenji kunye neswekile. Zingatyiwa zodwa okanye ngokudibanisa iidiliya, amandongomane, i-anise okanye imbewu yeesame kwintlama.
I-feqqas ibonakaliswa kukungcamla kwabo okuthobekileyo okulungele zonke iipalati. E-Fez kulisiko ukukhonza amaqhekeza e-feqqas ngesitya sobisi njengesidlo sakusasa sabantwana. Kubantu abadala, eyona nto ihamba phambili yeyona iti ishushu kakhulu. Awuyi kuba nakho ukuzama inye!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Iilekese eziqhelekileyo kunye nee-dessert